Endao hibizina sy hizara traikefa
Par: Endao hibizina
Date: 23 janvier 2018 - 17:05
Andao hifampizarana eto ny traikefa dia endao hampiadina.
Ohatra mety misy tia hanangana orinasa, dia mila fanampiana amin'ny resaka ressources humaines ohatra.
Re: Endao hibizina sy hizara traikefa
Date: 23 janvier 2018 - 19:09
Raikitra! Inona ary no hatao?
Par: Perla be
Date: 24 janvier 2018 - 09:57
Iza no manana license mba hivarotana alikaola hanaovana bar eny anjomakely RN7?
Date: 26 janvier 2018 - 10:56
za manana licence fa taxi, ny taxi nefa efa tsy miasa intsony. Iza no mila
Date: 26 janvier 2018 - 14:20
mis evolution ny admin ka,, ny band maafehy clouding,,clustering,, virtualisation ndrindra ndrindra ny resaka securité et audit informatik amzao tena tafa be
Date: 29 janvier 2018 - 15:34
licencier << ohatrinona izany lisansa izany, azonao ambara ve sa ahoana no ifandaisana